Maitiro ekuisa Blender paGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Makore apfuura, vagadziri vazhinji uye vanamuzvinabhizimusi vane hukama neSoftware vakazvipira kutaura kuti Mahara Software haina kupa zvakafanana nesoftware yevaridzi uye pamusoro payo yaive isina simba shoma kana kushanda kupfuura software yepamutemo. Inhema zvachose: kune mapurogiramu epamutemo ekushambadzira kana achienzaniswa newavo mahara Software Software uye zvinopesana.
Muenzaniso wakanaka weizvi zvese zvave uye iri Blender. Blender chirongwa cheMahara cheSoftware icho chakashandiswa kune akasiyana mapurojekiti ane mhedzisiro iri nani pane iyo inowanikwa nepropathiary software.
Mafirimu akati wandei muSarvel Comics saga pamwe nemapurojekiti asingaverengeke ane hukama neiyo 3D chiitiko uye mafirimu mapfupi mienzaniso yakanaka yesimba reBlender. Blender inotibvumidza isu kugadzira mifananidzo uye zvinoitika mu3D, isu tanga tichitaura nezvazvo kwenguva refu pano. Asi nhasi tiri kuzokuudza maitiro ekuisa chirongwa ichi pane yedu Gnu / Linux kugovera.
Kana tikashandisa Debian kana chero chinobva yeizvi isu tinofanirwa kunyora mune terminal:
Kana tikashandisa Arch Linux kana chero chinobva isu tinofanirwa kunyora:
Kana, pane kudaro, isu tinoshandisa SUSE, Red Hat kana chero chinobva yeizvi, isu tinofanirwa kunyora:
Kana, kune rumwe rutivi, isu tisingade kuve neshanduro yekuparadzira kwedu kana izvo zviri pamutemo marekodhi asina blender (chimwe chinhu chisingawanzoitika), tinogona kuzviwana kuburikidza iyo yepamutemo webhusaiti kwatichawana iyo yakamanikidzwa package pamwe nechirongwa pamwe nekodhi kodhi yeBlender.
Sezvauri kuona, Blender chirongwa cheMahara cheSoftware chiri nyore kuwana, gadza mukuparadzira kwedu uye zvine simba kwazvo, ikozvino isu tinongofanirwa kudzidza mashandisiro ayo kuti tiwane mhedzisiro seyakaratidzwa mumamuvhi e Thor, The Avengers kana Spiderman.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuisa Blender paGnu / Linux
Kana isu tikashandisa openuse ichave iri sudo zypper mune blender
Dai yaive gentoo kana funto ini ndinofungidzira kuti semudzi unobuda blender
Dai yaive sabayon Sudo equo yekuisa blender
Mhoro, ndatenda nemupiro wako. Hazvingaite "zvakajeka" kusara mumirairo yekuisa pane Debian kana zvigadzirwa?